Saaxiibtinimada Kubadda Cagta - Wikipedia
Saaxiibtinimada Kubadda Cagta
Saaxiibtinimada Kubadda Cagta waa barnaamij sanadlaha ah oo carruurta loogu talo galay oo ay fuliso shirkadda PJSC Gazprom. Ujeedada barnaamijku waa si loo kobciyo mabaadiida muhiimka ah looguna beero da' yarta xiise ay u qabaan hab nololeed caafimaad qab leh iyadoo la adeegsanayo kubadda cagta. Qaabdhismeedka barnaamijka, ciyaartooda kubadda cagta ee da'da 12 sano jir ah oo kaka la socoda dal oo kala duwan ayaa qayb galka Koobka Adduunka ee "Saaxiibtinimada KubaddaCagta", iyo Maalinta Caalamiga ah ee Kubadda Cagta iyo Saaxiibtinimada. Barnaamijka waxaa taageeray FIFA, UEFA, UN, Olympic iyo Guddiyada Paralympic, dowladaha iyo xiriirada kubada cagta ee wadamo kala duwan, samafalada qaranka, hay'adaha bulshada, hogaaminayo kooxyada kubada cagta ee dhulka. Barnaamika the global organizer waa Shirkadda Isgaarsiinta AGCT (Ruush).
1.1 Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2013
1.2 Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2014
1.3 Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2015
1.4 Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2016
1.5 Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2017
1.6 Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2018
1.7 Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2019
2 Koobka Adduunka ee SaaxiibtinimadaKubadda Cagta Saaxiibtinimada
3 Madasha Adduunka ee Carruurta ee Saaxiibtinimada Kubadda Cagta
4 Rugta Caalamiga ah ee Warbaahinta Carruurta
5 Maalinta Adduunka ee Saaxiibtinimada iyo Kubadda Cagta
6 Sagaal qiyam ee «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta»
7 Koobka Qiyamka Sagaalka Ah
8 Jijimaha Saaxiibtinimada
9 Hawlaha ka qayb galayaasha inta u dhaxaysa wareegyada
10 Abaalmarinaha iyo Hadiyaha
Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2013[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Kulankii ugu horreeyay ee caalamiga ahaa ee Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee loo qabto 670 oo carruur waxa uuka dhacay magaalada London 25-kii Maayo 2013. Waxana ka qayb galay carruur ka kala socotay 8 dal oo kala ah Bulgaria iyo Boqortooyada Ingiriiska iyo Hungary iyo Jarmalka iyo Giriiga iyo Ruushka iyo Serbia iyo Slovenia. Ruushka waxa matalayay 11 kooxood oo kubadda cagta ah oo ka kala socda 11 magaalo oo lagu qaban doono ciyaaraha Koobka Adduunka sannadka 2018. Sidoo kale waxa ka qayb galay naadiyada carruurta ee Zenit, Chelsea, Schalka 04, Crvena Zvezda oo ah naadiyada ku guulaystay maalinta ciyaaraha caruurta ee shirkadda Gazprom, sidoo kale waxa ka qayb galay Madashaas kooxihii ku guulaystay Dabaaldagga Fakel.
Kulanku intuu socday, caruurtu waxay la hadleen dhigooda ka socday dalalka kale iyo ciyaaryahannada caanka ah, waxaanay ka qayb galeen ciyaartii kama dambaysta ahayd ee Tartanka Horyaalka Kooxaha Yurub sannadkii 2012/2013 lagu qabtay garoonka Wembley.
Madasha waxa lagu soo gunaanaday dhambaal furan oo ay carruurtu ku xuseen qiyam sideed ah oo barnaamijka u dejisan oo kala ah: saaxiibtinimo, sinnaan, caddaalad, nabadgalyo, daacadnimo, guul iyo dhaqan. Kadib dhambaalka waxa loo diray madaxda UEFA iyo FIFA iyo IOC. Bishii September ee 2013, intii lagu jiray kulankii lala qaatay Vladimir Putin iyo Vitaly Mutko, waxa uu xaqiijiyay Sepp Blatter in uu soo gaadhay dhambaalku, waxaanu sheegay in uu diyaar u yahay in uu taageero Saaxiibtinimada Kubadda Cagta.
Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2014[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Xili ciyaareedkii labaad ee barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta waxa lagu qabtay magaalada Lisbon 23-25-kii May 2014 waxaana ka qayb galay in ka badan 450 dhalin ah oo ka kala socday 16 dal: Belarus, Bulgaria, Boqortooyada Ingiriiska, Hungary, Jarmalka, Talyaaniga, Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Serbia, Slovenia, Turkey, Ukraine, France iyo Croatia. Ciyaartoyda da'da yar waxay qayb galeen Madasha caalamiga ah eeSaaxiibtinimad Kubadda Cagta, tartanka kubadda cagtaee wadooyinka, waxyna ka qayb galeen ciyaartii kama dambaysta ee Horyaalka Kooxaha Yurub ee sanadkii 2013/2014 Kooxdii ku guulaysatay ciyaaraha dariiqyada sanadkii 2014 waxa ay ahayd kooxda Benfica junior (Portugal).
Natiijooyinkii xili ciyaareedka labaad ee barnaamijka waxay aheyd doorashada hoggaanka dhaqdhaqaaqa Saaxiibtinimada Kubadda Cagta. Waxa loo doortay Felipe Suarez oo u dhashay Portugal. Bishii June 2014, isagoo ah hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa, waxa uu booqday wareega sagaalaad ee kubadda cagta kacaanka oo ahayd xuskii Yuri Andreyevich Morozov.
Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2015[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Xili ciyaareedka saddexaad ee barnaamijka caalamiga ah ee Saaxiibtinimada Kubadda Cagta waxa lagu qabtay bishii June 2015 magaalada Berlin. Markii ugu horraysay waxa ka qayb galay barnaamijka caruur ka socota qaarada Aasiya, oo ka kala socday dalalk Japan iyo China iyo Kazakhstan. Guud ahaan, kooxo da'yar ah oo kala socday 24 naadi kubadda cagta ah oo ka socday 24 dal ayaa ka qayb galay xili ciyaareedkii sadexaad.
Ciyaaryahannada da'da yar waxay la sheekaysteen dhigoodii oo ka socday dalal kale iyo waliba xidigaha kubadda cagta oo uu ka mid yahay safiirka caalamiga ah ee barnaamijka Franz Beckenbauer, waxaanay sidoo kale ka qayb galeen horyaalka caalamiga ah ee kubadda cagta wadooyinka. Horyaalka Caalamiga ah ee Kubadda Cagta Wadooyinka waxa sannadkii 2015-ka ku guulaystay kooxda Rapid ee da'yarta (Austria).
Xili ciyaareedkii saddexaad ee barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta waxa soo tabinayay wararkiisa ku dhawaad 200 oo wariye oo ka kala socotay wargaysyada ugu caansan caalamka, sidoo kale waxa ka qayb galay 24 wariye ugu da'yar oo ka kala socday Yurub iyo Aasiya, kuwaas oo ka mid ahaa Rugta Warbaahinta Carruurta ee Caalamiga Ah.
Sannadkii 2015 waxa lagu soo gunaanaday xaflad lagu abaal marinayo Koobka qiyamka Sagaalka ah, kaasoo uu ku guulaystay naadiga Barcelona (Spain). Kooxda guushu raacday waxa soo doortay carruurtii ka qayb galay bilawgii Madasha codayn caalami ah oo ka dhacday 24 kii dal ee ka qayb galay Madasha.
Dhammaadkii Madasha dhammaan kooxihii ka qayb galay waxay fuliyeen dhaqanka ah ka qayb galka ciyaarta kama dambaysta ah ee Horyaalka Kooxaha Yurub ee sannadkii 2014/2014kii dhacay Garoonka Olimbikada Berlin.
Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2016[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Bilawgii Barnaamijka Caalamiga ah ee Carruurta ee Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee sannadkii 2016 waxa la qabtay shir jaraa'id oo loo adeegsaday barnaamijka Hangout ee internet-ka, waxaana lagu qabtay magaalada Munich 24-kii Maarso waxaana ka qaybgalay safiirka caalamiga ah ee barnaamjika Franz Beckenbauer.
Wareegii siddeedaad ee barnaamijka, 8 kooxood oo da'yar ah oo ka kala socday dalalka Azerbaijan, Algeria, Armenia, Argentina, Brazil, Vietnam, Kyrgyzstan, iyo Suuriya  ayaa ka qayb galay, taasoo ka dhigaysa wadarta guud ee dalalka ka qayb galay 32 dal.
5-tii April 2016, waxa bilaabantay codayntii koobka gaarka ah ee loo yaqaano Koobka Sagaalka Qiyam. Taageerayaal ka kala socday daafaha aduunka oo dhan ayaa ka qayb galay doorashada kooxda guulaysatay, laakiin go'aankii kama dambaysta ahaa waxaa gaadhay ka qayb galayaashii barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta iyagoo codkooda dhiibanaya. Koobka waxa ku guulaystay kooxda Bayern ee kubadda cagta (Munich). Ka qayb galayaashii barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta waxay xuseen hawlaha uu naadigu fuliyo si uu u taageero caruurta leh baahida khaaska ah ee ku nool dalalka kala duwan iyo caawinta dadka baahan.
Kulankii afraad ee caalamiga ah ee carruurta ee barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagtaiyo ciyaartii kama dambaysta ahayd ee horyaalka carruurta ee caalamiga ah ee kubadda cagta waddooyinku wuxuu magaalada Milan ka qabsoomay 27-28 Maajo ee 2016. Kooxdii ku guulaysatay horyaalku waxay ahayd kooxda Maribor ee dalka Slovenia. Dhammaadkii Madasha ka qaybgalayaashu waxay fuliyeen dhaqanka ah ka qayb galka ciyaarta kama dambaysta ah ee Horyaalka Kooxaha Yurub. Dhacdooyinkii Madasha waxa soo tabinayay wararkiisa in ka badan 200 oo wariye oo ka kala socday wargays yada ugu muhiimsan caalamka, sidoo kale waxa ka qayb galay Rugta Warbaahinta Caruurta ee Caalamiga Ah oo ay matalayeen wariyayaal da'yar oo ka kala socday dalalka ka qayb galay Madasha.
Ciyaaryahanno da'yar oo ka socda naadiga Suuriya ee Al-Waxda ayaa ka qayb galay xili ciyaareedkii afraad ee Saaxiibtinimada Kubadda Cagta, taas oo aan hore u dhicin. Ka qayb galinta kooxda reer Suuriya ee barnaamijka, iyo booqashada carruurta reer Suuriya ay ku tageen dhacdooyinka Milan, waxay ahayd tallaabo muhiim ah oo lagaga hortagayo go'doonka bini'aadam nimo ee saaran waddanka. Dhanka kale guddida tifaftirka ciyaaraha ee telefishanka caalamiga ah ee Russia Today, isagoo kaashanaya Xidhiidhka kubadda cagta ee Suuriya, ayaa soo duubay filim dokumenter ah oo lagu magacaabay "Saddex Cisho oo Bilaa Dagaal ah" oo ku saabsan carrurta ka qayb galay mashruuca. 14-kii September 2016-kii, in ka badan 7,000 oo qof ayaa booqday soo bandhigii ugu horreeyay ee filimka oo ka dhacay magaalada Dimishiq.
Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2017[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Goobta lagu qabtay mashruuca bulsheed ee carruurta ee caalamiga ah ee loogu talagalay Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee sannadkii 2017-kii waxa lagu qabtay magaalada St. Petersburg (Ruushka), ciyaarihii ugu dambeeyayna waxa lagu qabtaa magaaladaas intii u dhaxaysay 26-kii June ilaa 3-dii July.
Sannadkii 2017, tirada dalalka ka qayb galay barnaamijku waxay gaadhay 64 dal halkay ahayd 32 dal. Markii ugu horraysay waxa barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ah ka qayb galay carruur ka kala socday dalalka Mexico] iyo Maraykanka. Sidaa awgeed, mashruucu waxa uu mideeyay ciyaar yahanno da'yar oo ka kala socday afar qaaradood oo kala — Afrika, Yuureeshiya, iyo Waqooiyga Ameerika iyo Koonfurta Ameerika.
Xili ciyaareedkii shanaad barnaamijka waxa loo hirgaliyay hab cusub, halkaasoo ciyaartoy da'yar oo ka socda dal kasta ayaa loo doortay si uu u metelo dalkaas. Kadib waxay ciyaartoydu ku midoobeen sideed kooxood oo caalami ah oo saaxiibtinimo, kuwaas oo ka koobnaa wiilal iyo gabdho 12 jir ah oo ay ku jiraan carruur naafo ah.
Intii ay socotay isku aadka furan, waxa la go'aamiyay dalalka ay ka koobnaan doonaan kooxuhu, iyo doorka ay ciyaari doonaan ciyaar yahannada matalayay dalalka ka qayb galay tartanka. Isku aadka waxa lagu fuliyay habka shirarka shabakada internet-ka. Siddeeda kooxood ee ciyaartoyda da'da yar waxaa u madax ahaa tababarayaal da'yar: Rene Lampert (Slovenia), Stefan Maksimovich (Serbia), Brandon Shabani (Boqortooyada Ingiriiska), Charlie Sui (Shiinaha), Anatoly Chentuloyev (Ruushka), Bogdan Krolevetsky (Ruushka), Anton Ivanov (Ruushka), Emma Henschen (Holan). Sidoo kale Liliya Matsumoto (Jabaan) oo metelaysay rugta saxaafadda caalamiga ah ee barnaamijka Kubadda Cagta ee Saaxiibtinimada ayaa ka qayb gashay diyaarinta isku aadka.
Kooxdii ku guulaysatay Koobka Adduunka ee Saaxiibtinimadu Kubadda Cagta waxay aheyd kooxda 2017 "orange" oo ay ka mid ahaa tababare da'yar iyo ciyaartoy da'yar oo ka kala socday sagaal dal oo kala ah: Rene Lampert (Slovenia), Hong Jun Marvin Tue (Singapore), Paul Puig I Montana (Spain), Gabriel Mendoza (Bolivia), Ravan Kazimov (Azerbaijan), Khrisimir Stanimirov Stanchev (Bulgaria), Ivan Agustin Casco (Argentina), Roman Horak (Czech Republic), Hamzah Yusuf Nuri Alhavvat (Libya).
Madasha caalamiga ah ee carruurta ee Saaxiibtinimada Kubadda Cagta waxa ka qayb galay Viktor Zubkov (guddoomiyaha guddiga agaasimayaasha PJSC Gazprom), Fatma Samura (xoghayaha guud ee ururka FIFA), Philippe Le Flock (maareeyaha guud ee ganacsiga ee ururka FIFA), Giulio Baptista (ciyaartoy reer Brazil ah), Ivan Zamorano (Weeraryahan reer Chile ah), Alexander Kerzhakov (ciyaaroy Ruush ah) iyo marti kale, kuwaas oo ku baaqay kobcinta qiyamka doorka mudan ee bini'aadamnimo iyo in lagu dhex faafiyo jiilka da'da yar.
2017-kii, mashruucu waxa uu isu keenay in ka badan 600,000, halka in ka badan 1,000 carrur iyo dad waaweyn intaba leh oo ka kala socday 64 dal, ay ka qayb galeen ciyaarihii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada St. Petersburg.
Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2018[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Gudaha 2018, waxaa la go'aansaday in Xiliga Lixaad ee «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» waxaa la qabanayaa ka bilow Febraayo 15 illaa Juun 15. Xiritaanka dhacdooyinka waxay ka dhaceen Moscow markaas ka hor Koobka Caalamka ee 2018 FIFA. Ka qeybqaatayaasha barnaamijka waxaa ku jiro ciyaartoy dhalinyaro ah iyo joornaaliistayaal matalayo 211 wadan iyo gobolada caalamka world. Bilowga rasmiga ah ee Barnaamijka 2018 waxaa lagu sameeyay tooska Furitaanka Sawirka «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta», natiijooyinka taas oo 32 kooxyo kubada cagta caalami ah – Kooxyo Saaxibtinimo – ayaa la aasaasay.
Ku xirmida howlgalka deegaanka, 2018 Kooxyada «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» ee Caalamiga ah waxaa lagu magacaabay xayawaanada dhifka ah iyo xawayaanada halista ah:
Maroodiga Afrikaanka Ah
Libaax Badeedka Angel
Libaax Badeedka Nibiriga
Maska Boqorka Kobra
Yaxaaska Gavial ee Hindiya
Shimbirta Imperial Woodpecker
Daayeerka Capuchin ee Wajiga Cad
Dameer Farowga Grévy
Shimbirta Magellanic Penguin
Nibiriga Tuurta Leh
Eyga Ugaadhsiga ee Afrika
Libaaxa Badda Galápagos
Sidoo kale, gudaha qaabdhismeedka howgalka deegaanka, Ololaha Caalamiga Maalinta Farxada oo ku dhiirogelinayo bulshada caalamka inay taageeraan xayawaanada halista ’ hay'adaha keydinta ayaa la bilaabay Maajo 30, 2018. Darjiimada qaranka iyo keydadka Raashiya, USA, Nepal iyo Ingiriiska. waxay ku biireen Ololaha. Waxaa intaas dheer, inta lagu jiray dhacdooyinka ugu dambeeyo ee «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» ee Moscow, ka qeybqaatayaasha waxay ku safreen basaska deegaanka saaxibka la ah oo gaaska dabiiciga ah.
Wadamada iyo gobolada ka qeybqaadanayo 2018 «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta»:
1.	Barwaaqo sooranka Australia
2.	Jamhuuriyadda Austria
3.	Jamhuuriyadda Azerbaijan
4.	Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Dadka ee Algerian
5.	Jasiiradaha Virgin ee Maraykanka
6.	Samoa-da Maraykanka
8.	Antigua iyo Barbuda
9.	Jamhuuriyadda Carabta ee Masar
10.	Jamhuuriyadda Argentine
14.	Jasiiradaha Bermuda
15.	Jamhuuriyadda Bolivarian ee Venezweela
16.	Bosnia iyo Herzegovina
17.	Jasiiradaha Virgin ee Ingiriiska
19.	Imaarada Luxembourg
21.	Jamhuuriyadda Uruguay ee Bari
22.	Jamhuuriyadda Gabon
23.	Jamhuuriyadda Guinea
26.	Dowladda Israel
27.	Dowladda Qatar
28.	Dowladda Kuwait
29.	Dowladda Liibiya
30.	Dowladda Falastiin
32.	Jamhuuriyadda Hellenic
34.	Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Timor-Leste
35.	Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo
36.	Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee São Tomé iyo Príncipe
37.	Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Hantiwadaagga ee Sri Lanka
38.	Jamhuuriyadda Dominican
39.	Boqortooyada Haashimiga ee Urdun
40.	Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Afghanistan
41.	Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran
42.	Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania
43.	Jamhuuriyadda Talyaaniga
44.	Jamhuuriyadda Yaman
45.	Jasiiradaha Cayman
47.	Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha
48.	Shiinaha Taipei (Taiwan)
49.	Imaaradda Andorra
50.	Imaaradda Liechtenstein
51.	Jamhuuriyadda Iskaashiga ee Guyana
52.	Jamhuuriyadda Dadka ee Dimuqraadiga ah ee Korea
53.	Boqortooyada Baxrayn
54.	Boqortooyada Belgium
55.	Boqortooyada Bhutan
56.	Boqortooyada Denmark
57.	Boqortooyada Spain
58.	Boqortooyada Cambodia
59.	Boqortooyada Lesotho
60.	Boqortooyada Morocco
61.	Boqortooyada Netherlands
62.	Boqortooyada Norway
63.	Boqortooyada Sucuudiga
64.	Boqortooyada Swaziland
65.	Boqortooyada Thailand
66.	Boqortooyada Tonga
67.	Boqortooyada Sweden
68.	Jamhuuriyadda Kyrgyz
70.	Jamhuuriyadda Dadka ee Dimuqraadiga ah ee Lao
71.	Jamhuuriyadda Latvia
72.	Jamhuuriyadda Lubnaan
73.	Jamhuuriyadda Lithuania
75.	Jamhuuriyadda Maldives
76.	Gobolada Midoobey ee Mexico
77.	Dawladda Qoomiyadaha Badan ee Bolivia
80.	Jamhuuriyadda Dadka ee Bangladesh
81.	Dowladda Madaxa Bannaan ee Papua New Guinea
82.	Gobolka Madaxa Bannaan ee Samoa
85.	Jamhuuriyadda Midowga Tanzania
86.	Isutagga Imaaraadka Carabta
87.	Jasiiradaha Cook
88.	Jasiiradaha Turks iyo Caicos
89.	Jamhuuriyadda Albania
90.	Jamhuuriyadda Angola
91.	Jamhuuriyadda Armenia
92.	Jamhuuriyadda Belarus
93.	Jamhuuriyadda Benin
94.	Jamhuuriyadda Bulgaria
95.	Jamhuuriyadda Botswana
96.	Jamhuuriyadda Burundi
97.	Jamhuuriyadda Vanuatu
98.	Jamhuuriyadda Haiti
99.	Jamhuuriyadda Gambia
100.	Jamhuuriyadda Ghana
101.	Jamhuuriyadda Guatemala
102.	Jamhuuriyadda Guinea-Bissau
103.	Jamhuuriyadda Honduras
104.	Jamhuuriyadda Jabuuti
105.	Jamhuuriyadda Zambia
106.	Jamhuuriyadda Zimbabe
107.	Jamhuuriyadda Hindiya
108.	Jamhuuriyadda Indooniisiya
109.	Jamhuuriyadda Ciraaq
110.	Jamhuuriyadda Ireland
111.	Jamhuuriyadda Iceland
112.	Jamhuuriyadda Kazakhstan
113.	Jamhuuriyadda Kenya
114.	Jamhuuriyadda Qubrus
115.	Jamhuuriyadda Colombia
116.	Jamhuuriyadda Congo
117.	Jamhuuriyadda Korea
118.	Jamhuuriyadda Kosovo
119.	Jamhuuriyadda Costa Rica
120.	Jamhuuriyadda Ivory Coast
121.	Jamhuuriyadda Kuba
122.	Jamhuuriyadda Liberia
123.	Jamhuuriyadda Mauritius
124.	Jamhuuriyadda Madagascar
125.	Jamhuuriyadda Macedonia
126.	Jamhuuriyadda Malawi
127.	Jamhuuriyadda Mali
128.	Jamhuuriyadda Malta
129.	Jamhuuriyadda Mozambique
130.	Jamhuuriyadda Moldova
131.	Jamhuuriyadda Namibia
132.	Jamhuuriyadda Niger
133.	Jamhuuriyadda Nicaragua
134.	Jamhuuriyadda Cape Verde
135.	Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan
136.	Jamhuuriyadda Panama
137.	Jamhuuriyadda Paraguay
138.	Jamhuuriyadda Peru
139.	Jamhuuriyadda Poland
140.	Jamhuuriyadda Bortaqiiska
141.	Jamhuuriyadda Rwanda
142.	Jamhuuriyadda San Marino
143.	Jamhuuriyadda Seychelles
144.	Jamhuuriyadda Senegal
145.	Jamhuuriyadda Serbia
146.	Jamhuuriyadda Singapore
147.	Jamhuuriyadda Slovenia
148.	Jamhuuriyadda Midowga Myanmar
149.	Jamhuuriyadda Sudan
150.	Jamhuuriyadda Suriname
151.	Jamhuuriyadda Sierra Leone
152.	Jamhuuriyadda Tajikistan
153.	Jamhuuriyadda Trinidad iyo Tobago
154.	Jamhuuriyadda Turkmenistan
155.	Jamhuuriyadda Uganda
156.	Jamhuuriyadda Uzbekistan
157.	Jamhuuriyadda Fiji
158.	Jamhuuriyadda Philippines
159.	Jamhuuriyadda Croatia
160.	Jamhuuriyadda Chad
161.	Jamhuuriyadda Montenegro
162.	Jamhuuriyadda Chile
163.	Jamhuuriyadda Ecuador
164.	Jamhuuriyadda Equatorial Guinea
165.	Jamhuuriyadda El Salvador
166.	Jamhuuriyadda Koonfurta Sudan
167.	Jamhuuriyadda Cameroon
168.	Midowga Ruushka
170.	Gobolka Maamulka Gaarka ah ee Hong Kong oo ka mid ah Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha
171.	Dawladda Xorta Ah ee Shuraakada ah Puerto Rico
172.	Waqooyiga Ireland
173.	Saint Vincent iyo Grenadines
175.	Jamhuuriyadda Suuriya ee Carbeed
176.	Jamhuuriyadda Slovakia
177.	Dowladda Bahamas
178.	Dowladda Dominica
179.	Boqortooyada Midowda ee Ingiriiska iyo Waqooyiga Ireland
180.	Gobolada Midoobay ee Maraykanka
181.	Jasiiradaha Solomon
182.	Jamhuuriyadda Hanti wadaaga ah ee Vietnam
183.	Midowga Comoros
184.	Gobolka Maamulka Gaarka ah ee Macao ee Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha
185.	Saldanada Cumaan
187.	Gobolka Guam
188.	Jamhuuriyadda Togo
189.	Jamhuuriyadda Tunisia
190.	Jamhuuriyadda Turkey
193.	Jasiiradaha Faroe
194.	Jamhuuriyadda Federaalka ee Dimoqraadiga ah ee Nepal
195.	Jamhuuriyadda Federaalka ee Dimoqraadiga ah ee Ethiopia
196.	Jamhuuriyadda Federaalka Brazil
197.	Jamhuuriyadda Federaalka Germany
198.	Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria
199.	Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed
200.	Federaalka Saint Kitts iyo Nevis
201.	Jamhuuriyadda Finland
202.	Jamhuuriyadda Faransiiska
203.	Jamhuuriyadda Badhtamaha Afrika
204.	Jamhuuriyadda Czech
205.	Midowga Switzerland
208.	Jamhuuriyadda Estonia
209.	Jamhuuriyadda Koonfur Africa
32 Kooxyada Caalamiga ah ee Saaxibtinimada ayaa ka qeybqaatay oo ka qeybqaatay Saaxiibtinimada Kubadda Cagta 2018 Horyaalka Caalamka. Markii koowaad taariiq ahaan Barnaamijka, ciyaarta ugu dambeyso waxaa bilaabay Faaliye Dhalinyaro ah oo ka yimid Siiriya, Yazan Taha oo waxaa xukumay Rafarii Dhalinyaro ee ka socdo Raashiya, Bogdan Batalin.
Guuleystaha «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» 2018 wuxuu ahaa kooxda “Chimpanzees” oo ka kooban Ciyaartoy Dhalinyaro ah ee ka socdo Dominika, St. Kitts iyo Nevis, Malawi, Kolombiya, Benin iyo Jamuuriyada Dimuqraadiga Koongo. Vladislav Poliakov, Ka qeybqaate da' yar ee ka socdo Saransk, Raashiya, ayaa hagayay koox.
Dhacdada ugu dambeyso ee Xiliga Lixaad ee Barnaamijka wuxuu noqday 2019 Kubada Carruurta Caalamiga ah oo Kulanka Saaxibtinimada, ee la qabtay Juun 13 lagu qabtay Xarunta Oceanography iyo Marine Biology "Moskvarium". Waxaa soo booqday Viktor Zubkov (Guddoomiyaha Guddiga Agaasimayaasha Shirkada Gazprom), Olga Golodets (Guddoomiye ku xigeenka Dowlada Raashiyaan Fadareeshin), Iker Casillas (Ciyaartoyga kubada cagta Isnaanishka, kabtan hore ee kooxda qaranka), Aleksandr Kerzhakov (Ciyaartoyga kubada cagta Raashiyaanka, tababaraha kooxda kubada cagta dhalinyaraha Raashiyaanka), sidoo kale sida wakiilada 54 safaaradood oo ka socdo dhammaan daafaha caalamka iyo marti kale.
Inta lagu jiray Kulanka, Ciyaartoyda Dhalinyarada ugu wanaagsan ee Lix Siison ayaa la abaalmariyay: Deo Kalenga Mwenze oo ka socda Jamhuuriyada Dimuqraadiga Koongo (wuxuu horay ka ciyaaraha ugu wanaagsan), Yamiru Ouru ka socda Benin (dhax ka ciyaaraha ugu wanaagsan), Ivan Volynkin oo ka socda Wales (gool celiyaha ugu wanaagsan) iyo Gustavo Cintra Rocha oo ka socda Brazil (MVP).
Sakali Ascension ka socda Aruba wuxuu noqday Joornaaliistaha Dhalinyarada ah ee ugu wanaagsan Barnaamijka «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» 2018, Waxay ka shaqeysaa bog ku dhiirogelinayo dhalinyarada Oceania inay noqdaan kuwa deegaan ahaan taxadarayo.
Kulanka sidoo kale wuxuu martigeliyay bandhiga buuga iyo kulanka saxiixa ka qeybqaatayaasha Siisonkii hore, Ananya Kamboj oo ka socda Hindiya. Ananya ayaa qoray Buugga “Safarkeyga ka soo bilow Mohali illaa St. Petersburg” kadib Siisonka Shannaadka ee «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» 2017, oo sharaxayo waaya aragnimadeeda sida Joornaaliiste Dhalinyaro ah. Halkaas waxay ku qortay wax ku saabsan Sagaal Qiyam oo Barnaamij ah, kaas oo isbadelayo caalamka sida wanaagsan.
Xiliga Juun 14, kadib 2018 Kulanka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta Carruurta Caalamiga ah, Ciyaartoyda Dhalinyarada iyo Joornaaliistayaal ayaa ka qeybqaatay xaflada furitaanka Koobka Aduunka 2018 ee Raashiya. Garoonka “Luzhniki”, carruurta waxay si wanaagsan u taageen calamada dhammaan 211 wadamo iyo gobolada ka qeybqaadanayo Barnaamijka sannadkaas. Taasi kadib, Ka qeybqaatayaasha Dhalinyarada ee «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» waxay daawadeen ciyaarta furitaanka oo dhaxeysay kooxyada Raashiya iyo Sacuudiga.
Madaxweynaha Raashiyada Federeeshinka Vladimir Putin ayaa ku casuumay Safiirka Dhalinyarada raashiyaanka ee «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» Albert Zinnatov fadhigiisa si ay wada daawadaan ciyaarta furitaanka. Halkaas dhalinyarada waxay heleen fursada looga sheekeysto Horyaalka Koobka Kubada Cagta ee Brazil Roberto Carlos iyo ciyaartoyga kubada cagta Isbaanishka Iker Casillas.
In ka badan 1500 carruur iyo dhalinyaro ka socda 211 wadamo iyo gobolo ayaa noqday ka qeybqaatayaasha dhacdooyinka ugu dambeeyo ee lagu qabtay Moscow. Guud ahaan, in ka badan 180 dhacdooyin ayaa lagu qabanayaa in ka badan 240,000 ka qeybqaatayaal dhalinyaro ah ayaa la diyaariyay inta lagu jiray Siisonka Lixaad ee gobolo kala duwan oo caalamka ah.
Gudaha 2018, wakiilada Maamulada ayaa taageeray mashruuca. Olga Golodets ayaa aqriyay qudbada soo dhaweynta oo ka socota Madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin ee ku socota qeybqaatayaasha iyo martida Kulanka Carruurta Caalamiga ah. Guddoomiyaha Dowlada Raashiyada Fadareeshinka Dmitry Medvedev ayaa u soo diray fakis soo dhaweyn ah ka qeybqaatayaasha iyo martida ee Kubada cagta Carruurta Caalamiga ee Kulanka Saaxibtinimada sixaad.
Inta lagu jiray dulmarida Maajo 23, Wakiil Rasmi ah ee Raashiyaanka MIA Maria Zakharova ayaa sheegay in bulshada caalamka aqoonsantahay maalmahaan «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» sida qeyb bani'aadannimo muhiim ah ee xeerka bulshada caalamiga ah ee Raashiya.
FIFA dhaqan ahaan waxaa taageeray «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta». Hay'ada waxay ogaatay in tirada guud ee ka qeybqaatayaasha iyo martida dhacdooyinka ugu dambeeyay ee lagu qabtay Moscow gaareen 5000 oo dad.
Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee 2019[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Gudaha 2019, dhacdooyinka ugu muhiimsan ee Siisonka Todobaad ee «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» waxaa lagu qabanayaa Madrid ka bilow Maajo 28 illaa Juun 02. Dhaqan ahaan, ka kooban kooxyo isku jiro - Kooxyo Caalami ah ee Saaxibtinimada – waxaa la go'aansanayaa inta lagu jiro furitaanka sawirida. Sida ay aheyd 2018, Kooxyada waxaa lagu magacaabay xayawaanada dhifka ah iyo xayawaanada halista ah.
Mid ka mid ah dhacdooyinka Siisonka Todobaad wuxuu markale noqonayaa Kubada cagta Caalamiga ah ee Kulanka Saaxibtimimada. Kulanka 2019 wuxuu noqonayaa heerka wadahadalka dhisan iyo waaya aragnimada isdhaafsiga ciyaartoyda kubada cagta, siyaasiyiinta iyo wakiilada bulshada iyo hay'adaha ciyaaraha. Kulanka waxaa loogu talogalay arimaha hormarinta kubada cagta carruurta iyo dhalinyarada caalamka oo dhan.
Koobka Adduunka ee SaaxiibtinimadaKubadda Cagta Saaxiibtinimada[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Tartanka adduunka ee kubadda cagta carruurta waxa loo agaasimaa si waafaqsan nidaamka barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta Saaxiibtinimada. Kooxaha ka qayb galaya koobka – Saaxiibtinimada Kubadda Cagta – waxa lagu sameeyaa Isku Aad Furan. Kooxaha samayntoodu waxay waafaqsan tahay mabda'a Saaxiibtinimada Kubadda Cagta, kaas oo ah in ciyaaryahanno ka kala socda qoomiyado iyo jinsiyo iyo awoodo jidheed oo kala duwan ay isugu yimaadaan koox kaliya.
Madasha Adduunka ee Carruurta ee Saaxiibtinimada Kubadda Cagta [Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Madasha Adduunka ee Carruurta ee Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ee sannadlaha ah, da'yarta ka qayb gala mashruuca iyo dadka waaweyn waxay kaga wada hadlaan horumarinta iyo kobcinta qiyamka barnaamijka iyo sidii loogu faafin lahaa dunida oo dhan. Madashu intay socoto, carruurtu waxay la kulmaan lana sheekaystaan caruurta dhiggooda ah ee ka kala socda dalalka kale, iyo ciyaaryahannada caanka iyo wariyayaasha iyo shakhsiyaadka caanka ah, waxaanay sidoo kale noqdaan safiiro mustaqbalka sii wadi doona faafinta qiyamka caalamiga ah.
Rugta Caalamiga ah ee Warbaahinta Carruurta[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Rugta Caalamiga ah ee Warbaahinta Carruurtu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta. Markii ugu horraysay ee la hirgaliyo waxay ahayd 2014-kii si ay qayb uga noqoto barnaamijka Kubadda Cagta Saaxiibtinimada. Wariyayaal da'yar oo ka tirsan rugta saxaafadda ayaa soo tabiya wararka dhacdooyinka barnaamijka ee ka dhaca dalalkooda, waxaanay soo diyaariyaan wararka lagu baahiyo warbaahinta maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee ku saabsan ciyaaraha, waxaanay ka qayb qaataan diyaarinta barnaamijyo laga siidaayo Telefishanka iyo Wargayska iyo Idaacadda barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta. Rugta Caalamiga ah ee Warbaahinta Carruurtu waxay midaysaa dhalinta ku guulaysata tarnnada maxaliga ah ee abaalmarinta Wariyaha Da'da Yar ee Ugu Waca, iyo qoraayada mareegaha iyo sawir qaadayaasha iyo qoraayada. Wariyayaasha da'da yar ee rugta saxaafadu waxay soo bandhigaan.
Maalinta Adduunka ee Saaxiibtinimada iyo Kubadda Cagta[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Xeerka barnaamijka Saaxiibtinimada iyo Kubadda Cagta, Maalinta Adduunka ee Saaxiibtinimada iyo Kubadda Cagta waxaa loo dabaaldegay Abril 25. Maalintan waxa markii ugu horraysay 2014-kii looga dabbaal dagay 16 dal. Maalintan waxa la qabtay ciyaaro saaxiibtinimo, kulano, socodyada idaacada, bandhigyada TV-ga, tababaro furan, iwm. In ka badan 50,000 oo qof ayaa ka qayb galay dabbaal dagga.
2015-kii, Maalinta Saaxiibtinimada iyo Kubadda Cagta waxa looga dabbaal dagay 24 dal. Intii lagu jiray feestada, waxaa jiray ciyaaro saaxiintinomo iyo dabaaldegyo kale. Dalka Jarmalka, naadiga Schalke 04 ayaa ku qabtay tartanno furan, Serbia waxa lagu qabtay bandhig TV, Ukrain waxa lagu qabtay ciyaar u dhaxaysay kooxda da'yarta Volyn FC iyo carruurta ka diiwaan gashan xarunta badhtamaha magaalada ee Lutsk ee adeegyada bulshada ee qoysaska iyo carruurta iyo da'yarta.
Ruushka, 11 magaalo ayaa looga dabbaal dagay Maalinta Kubadda Cagta iyo Saaxiibtinimada 25-kii April. Ciyaaro saaxiibtinimo ayaa lagu qabtay magaalooyinka Vladivostok, Novosibirsk, Yekaterinburg, Krasnoyarsk, Barnaul, St. Petersburg iyo Saransk si loo xusuusto qiyamka aasaasiga ah ee barnaamijka. Magaalooyinka Krasnoyarsk iyo Sochi iyo Rostov-on-Don waxa laga qabtay Socod Saaxiibtinimo oo ay ka qayb galeen dadka qaaday dabka socodkii olimbikada ee 2014-kii. Moscow, ayaa lagu qabtay Tartanka Fursadaha loo Simanyahay iyoadoo taageero laga helayo Xidhiidhka Ciyaaraha Dadka Indhaha la'. Maajo 5-teedii waxa Maalinta Saaxiibtinimada iyo Kubadda looga dabbaal dagay magaalooyinka Nizhny Novgorod iyo Kazan.
2016-kii, waxa maalinta Kubadda Cagta iyio Saaxiibtinimada looga dabbaal dagay 32 dal. Ruushka, waxa looga dabbaal dagay sagaal magaalooyinkan: Moscow, St. Petersburg, Novosibirsk, Barnaul, Birobidzhan, Irkutsk, Krasnodar, Nizhny Novgorod iyo Rostov-on-Don. Nizhny Novgorod waxa lagu qabtay ciyaar saaxiibtinimo oo ay ku kulmeen ciyaaryahanno da'yar oo ka socday naadiga Volga FC, halka ciyaaryahanno da' wayn oo ka socda naadigu ay fuliyeen jimicsiga diyaar garowga iyo tababarada carruurta. Ciyaar saaxiibtinimo oo ka dhacday magaalada Novosibirsk ayaa waxa ka qayb galay carruur naafo ah, oo ka socday kooxda gobolka Novosibirsk ee Yermak-Sibir.
2017-kii, Maalinta Kubadda Cagta iyo Saaxiibtinimada waxa looga dabbaal dagay 64 dal. Ciyaaryahanno caan ah oo ay ka mid yihiin ciyaaryahanka difaaca ee reer Serbia Branislav Ivanovich, iyo weeraryahanka reer Holland Dirk Kuyt, ayaa ka qayb galay ciyaaro kala duwan oo aduunka ka dhacay. Dalka Giriiga dabbaal daggii ka dhacay waxa ka qayb galay Theodoras Zagorakis, oo ku guulaystay Koobka Kubadda Cagta ee Yurub 2004-kii isagoo u ciyaaraya kooxda dalkiisa. Ruushka, naadiga Zenit FC waxa uu tababar gaar ah u qabtay Zakhar Badyuk, safiirka da'da yar ee barnaamijka Kubadda Cagta Saaxiibtinimada ee 2017-kii. Tartanku intuu socday, goolhayaha naadiga Zenit FC Yury Lodygin waxa uu darajo sare siiyay Zakhar markuu arkay awoodihiisa, waxaanuu u gudbiyay sirta goolhaynta.
Sagaal qiyam ee «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta»[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Inta lagu jiray Kulanka Koowaad ee Carruurta Caalamiga ah ee Maajo 25, 2013, Wakiilada Dhalinyarada ee ka socdo Ingiriiska, Jarmalka, Islofeeniya, Hangari, Serbiya, Bulgaariya, Gariiga iyo Raashiya ayaa ogaaday sideed qiyam ee ugu horeeyo ee Barnaamijka - saaxibtinimada, sinnaanta, cadaalada, caafimaadka, nabada, ixtiraamka, guusha, iyo dhaqamada – oo lagu bandhigay Warqad Furan. Warqada waxaa loo diray Madaxda Hay'adaha Ciyaaraha Caalamiga ah: Ururka Kubada Cagta Fadareeshinka Caalamiga (FIFA), Ururada Kubada cagta Midowga Yurub (UEFA) iyo Guddiga Olombiga Caalamiga ah. Gudaha Sebteembar 2013, Joseph Blatter inta lagu jiray la kulankiisa Vladimir Putin iyo Vitalii Mutko ayaa xaqiijiyay helitaanka Warqada oo ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu taageero «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta».
Gudaha 2015, ka qeybqaatayaasha ka socda Shiinaha, Jabaanka iyo Kasakhastan ayaa ku biiray Barnaamijka «Saaxiibtinimada Kubadda Cagta» oo kadib soo jeediyay inuu ku daro sagaalka qiyam – sharafta.
Koobka Qiyamka Sagaalka Ah[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Koobka Qiyamka Sagaalka Ah waa abaal marin uu bixiyo barnaamijka caalamiga ah ee carruurta ee Kubadda Cagta Saaxiibtinimada. Sannad kasta Koobka waxa la guddoonsiiyaa kooxda muujisa inay go'ansaday qiimaha mashruuca: saaxiibtinimo, sinnaan, caddaalad, caafimaad, nabadgalyo, daacadnimo, guul, dhaqan iyo sharaf. Taageerayaal ka kala socday dhamaan daafaha aduunka ayaa ka qay galay doorashada kooxda guulaysatay, laakiin go'aankii kama dambaysta ahaa waxaa gaadhay ka qayb galayaashii mashruuca Kubadda Cagta Saaxiibtinimada iyagoo codkooda dhiibanaya. Naadiyada kubadda ee ku guulaystay Koobka Qiyamka Sagaalka Koob: Barcelona (2015), Bayern Munich (2016), Al Wahda (Haddiyada Gaar ah), Real Madrid (2017).
Jijimaha Saaxiibtinimada[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Dhammaan hawlaha barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta waxay ku bilaabmaan is waydaarisga Jijimaha Saaxiibtinimada, taas oo ah astaanta sinnaanta iyo qaab nololeed caafimaad leh. Jijimuhu waxay ka kooban yihiin laba dunood oo buluug iyo cagaar ah, waxaana xidhan kara qof kasta oo aaminsan qiyamka barnaamijka.
Sida laga soo xigtay Franz Beckenbauer
"Astaanta dhaqdhaqaaqani waa jijin labo midab leh, waanay fududahay waana la fahmi karaa sida uu u fududyahay loona fahmi karo barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta.
Dhalinta ka qaybgaay barnaamijku waxa gacmaha ugu xidheen Jijimaha Saaxiibtinimada ciyaaryahanno iyo shakhsiyaad caan ah, oo ay ka mid yihiin: Dick Advocaat, Anatoly Timoshchuk and Luis Netu, Franz Beckenbauer, Luis Fernandev, Didier Drogba, Max Meyer, Fatma Samura, Leon Gorecka, Domenico Krishito, Michel Salgado, Alexander Kerzhakov, Dimas Pirros, Miodrag Bozovic, Adelina Sotnikova, Yuri Kamenets.
Hawlaha ka qayb galayaasha inta u dhaxaysa wareegyada[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Ciyaaryahannada kubada cagta ee da'da yar ee loogu tagalay barnaamijka Saaxiibtinimadu Kubadda Cagta waxay ka qayb galeen dhacdooyin kala duwan oo baxsan wareega rasmiga ah. Bishii May ee 2013-kii, ciyaaryahanno ka socda naadiga Maribor ee kubadda da'yarta (Slovenia) ayaa qabtay ciyaar saaxiibtinimo oo samafal ah oo ay ka qayb galeen carruurta reer Cambodia. 14-kii September 2014-kii, waxa magaalada Sochi ay ka qayb galayaasha barnaamijka ee ka socday Ruushku la hadleen Vladimir Putin intii uu socday kulankii Madaxwaynaha Midowga Ruushka iyo Madaxwaynaha Ururka FIFA Sepp Blatter. Bishii Juun ee 2014, Madaxwaynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa kooxda Taverni oo xubin ka ah barnaamijka Saaxiibtinimada Kubadda Cagta ku casuumay Qasriga Elysee si ay u daawadaan ciyaartii Koobka Adduunka FIFA 2014-kii ee u dhaxaysay Faransiiska iyo Nayjeeriya. Bishii Abriil ee 2016-kii, Yuri Vashchuk, safiirkii barnaamijka Kubadda Cagta Saaxiibtinimada ee 2015-kii, ayaa la kulmay ninka ugu xoogga wayn dalka Belarus Kirill Shimko, iyo ciyaaryahanno da'yar oo ka socday naadiga BATE FC si ay u wadaagaan khibradii ay ka heleen ka qayb galidda mashruuca. Yuri Vashchuk waxa uu guddoonsiiyay Kirill Shimko Jijimaha Saaxiibtinimada, halkaas oo uu guddoonsiiyay usha si uu u kobciyo qiyamka mashruuca ee ah saaxiibtinimada, caddaalada iyo qaab nololeedka caafimaadka leh.
Abaalmarinaha iyo Hadiyaha[Wax ka bedel | wax ka bedel xogta]
Barnaamijka Saaxiibtinimadu Kubadda Cagta waxa uu ku guulaystay tartanno kala duwan waxaanuu helay abaalmarino Ruushka iyo caalamkaba uu ka helay. Waxaa ka mid ah: “Mashaariicda Bulshada Ugu Wacan ee Ruushka” ee qaybta “Horumarinta Iskaashiga Caalamka”, iyo abaal marinta Ururka Xiriirrada Ganacsiga ee Caalamiga ah (IABC) ee Gold Quill Awards ee qaybta “Masuuliyadda Bulshada ee Shirkadaha” (2016), iyo abaal marinta Saber Awards ee qaybta “Mashruuca Adduunka Ugu Wanaagsan ee Bulshada” (2016), iyo abaal marinta Drum Social Buzz Awards ee qaybta “Istaraatiijiyada Caalamiga ee ugu Wacan” (2017) Abaal marinaha caalamiga ah ee adeegyada hal-abuurka leh ee suuqgaynta casriga ah, qaybta “Istaraatiijiyada Warbaahineed ee ugu Wacan” (2017), iyo abaal marinta “Silver Archer” qaybteeda “Mashruuca Bulsheed ee Ruushka ugu Wacan” (2018), iyo Tartanka Abaalmarinta Wayn ee “Silver Archer” (2018).
↑ 15.0 15.1 https://rbth.com/sport/2016/03/31/gazprom-soccer-project-unites-worlds-children-for-4th-year_580729
↑ 22.0 22.1 22.2 www.newswit.com/.gen/2017-03-17/bafb838790ea60129b53d1add5e4ee99/
↑ 41.0 41.1 https://www.championat.com/football/news-3707473-segodnja-startuet-sedmoj-sezon-socialnoj-programmy-futbol-dlja-druzhby.html
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Saaxiibtinimada_Kubadda_Cagta&oldid=191748"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga badelay 19:05, 16 Abriil 2019.